သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ🥇 Emulator.online 🥇🥇
ဒီ website မှာတာဝန်ရှိသည်, သင်တို့ကိုငါသင့် privacy နှင့် ပတ်သက်. အကြီးမြတ်ဆုံးဥပဒေရေးရာအာမခံချက်ဆောင်ကြဉ်းနှင့်ဤ website ကိုအတွင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့စိုးရိမ်တာဖြစ်နိုင်တယ်, အရာအားလုံးသကဲ့သို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ထင်သာမြင်သာရှိမှုကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။
အဲဒါကိုဖတ်ရှုဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာရန်နှင့် အကယ်. သင်ဤအတူသဘောမတူဘူးလျှင်, ဒီ site ပေါ်တွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မပို့ကြဘူးအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်ပါအခြေအနေများ, အသုံးပြုသူအပေါ် binding နှင့်ဤ site ကိုများအတွက်တာဝန်ရှိနေကြသည်။
ဤပေါ်လစီကို 30/04/202020 တွင်ပြင်ဆင်ထားသည်
အထက်ဖော်ပြပါကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပါပြpurposes္ဌာန်းချက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Online Servicios Telemáticos SL မှ NIF: B19677095 နှင့်ပိုင်ဆိုင်သော“ WEB နှင့် SUBSCRIBERS ၏ USERS” ဖိုင်တွဲတွင်ပါဝင်လိမ့်မည် C / Blas de Otero နံပါတ် ၁၆ လိပ်စာ Iz ။ -16 - Albolote (ဂရန်ဒါ) ဤဖိုင်သည် LOPD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတော် ၀ င်အမိန့် ၁၇၂၀-၂၀၀၇ တွင်ချမှတ်ထားသည့်နည်းပညာနှင့်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေးပို့ခြင်းသည် emulador.online သို့ဆက်သွယ်ခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်စာအုပ်များကိုဒီဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့် ၀ ယ်ခြင်းတို့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ တောင်းဆိုထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမဖြည့်ဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဤအချက်အလက်များကာကွယ်ခြင်းမူဝါဒကိုလက်မခံခြင်းတို့သည်အကြောင်းအရာကိုစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပြုလုပ်သောတောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်။
ဒါဟာသင်ဤ website တွင်အညွှန်းများအတွက်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးမလိုအပ်ပါဘူး။
အဘယ်အရာကိုဒေတာဒီ website ကိုလိုအပ်သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရည်ရွယ်ချက်
ဤပေါ်လစီကို 25/03/2018 တွင်ပြင်ဆင်ထားသည်
emulator.online သည်သုံးစွဲသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်မှတဆင့်အင်တာနက်မှတဆင့်စုဆောင်းသည်။ စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီပေါ် မူတည်၍ အခြားသူများအကြားဖြစ်နိုင်သည် - အမည်၊ အမည်၊ အီးမေးလ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုဆက်သွယ်မှု။ ထိုနည်းတူစွာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ စာအုပ် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်းအတွက်ကိစ္စရပ်များအတွက်ဘဏ်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက်အသုံးပြုသူအားကျွန်ုပ်တောင်းပါလိမ့်မည်။
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်စုဆောင်းရန်အတွက်တိကျသောလုံလောက်သောအချက်အလက်များကိုသာလိုအပ်လိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ Minimize ။
အတိုင်းအတာဖြစ်နိုင်သမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ Seudonimizar ။
ဒီ website တွင်လုပ်ကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မှင့်လင်းမြင်သာပေးပါ။
အားလုံးအသုံးပြုသူများကိုဤ website တွင်ရာအရပ်ကိုကြာသူတို့ရဲ့ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့စောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုရန်။
Create နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလုံခြုံရေး features တွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံအညွှန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကိုဆက်ကပ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဤ site ပေါ်တွင်ကောက်ခံအချက်အလက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
es ၏အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူသည်သူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်အဆက်အသွယ်ပုံစံတွင်မဆိုထားရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်သံသယများ၊ တိုင်ကြားမှုများ၊ မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်ဥပဒေရေးရာစာသားများနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများအပြင်သင်ရရှိနိုင်သောအခြားမေးမြန်းချက်များ။
စာရင်းသွင်းခြင်းစာရင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၊ သတင်းလွှာများ၊ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးပို့ရန်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရင်းပေးသွင်းစဉ်အသုံးပြုသူမှပေးသောအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်အမည်ကိုသာအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အသုံးပြုမှုအခြေအနေများနှင့်တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာမှုကိုအာမခံပေးရန်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည်၎င်းစုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအာမခံရန်အထောက်အကူပြုသည့်ကိရိယာများနှင့် algorithms များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပါဝင်နိုင်သည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်သို့တင်ရန်
အချို့ကိစ္စများတွင်, ဒီ site ကိုမှဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များသည်ငါ့န်ဆောင်မှုများပိုမိုကောင်းမွန်စေ၏တစ်ဦးတည်းသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြော်ငြာရှင်များ, စပွန်ဆာသို့မဟုတ် affiliates အဖြစ်တတိယပါတီများမှနှင့်အတူအမည်ဝှက်သို့မဟုတ်စုစုပေါင်း shared နှင့်ဝဘ်ငွေရရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အပြောင်းအလဲနဲ့တာဝန်များကိုဥပဒေများအပေါင်းတို့နှင့်တကွသင့်အခွင့်အရေးများနှင့်အညီစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်လိမ့်မည်လက်ရှိစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုလေးစားပါလိမ့်မည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌, အသုံးပြုသူဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်တကွအသုံးပြုမှုအပေါ်အပြည့်အဝအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်, နှင့်မည်သည့်အချိန်ကသူတို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလိမ့်မည်။
ဒီ website တွင်တတိယအုပ်စုတွေကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်န်ဆောင်မှုများ
၄ င်း၏လှုပ်ရှားမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လုံးဝလိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန် Online Servicios Telemáticos SL သည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ privacy အခြေအနေများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပံ့ပိုးသူများနှင့်အချက်အလက်များကိုမျှဝေသည်။
Courier service နှင့် newsletters များပို့ခြင်း MailChimp ။ 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 ။
တိမ်တိုက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်အရန်ကူးခြင်း - Dropbox -Drive, Wetransfer, Amazon ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှု (Amazon S3)
systems ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုဖမ်းယူဒါကြောင့်ဒီက web စုဆောင်း
ဤ site ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖမ်းယူအသုံးပြုသည်။ ဒီ website ကိုအမြဲညွှန်ပြသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
emulator.online အသုံးပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖမ်းယူရန်စနစ်များ :
ပါဝင်မှုပုံစံများ - ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်စာရင်းသွင်းမှုကိုသက်ဝင်စေရန်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်၏အီးမေးလ်စာဝင်ပုံးကိုကြည့်ပါ။ အသုံးပြုသူသည်၎င်းတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ၄ င်းတို့၏ subscription ကိုအတည်ပြုရမည်။ ပေးအပ်ထားသည့်အချက်အလက်များကိုသတင်းလွှာပို့ရန်နှင့်သတင်းများနှင့်အထူးကမ်းလှမ်းချက်များအကြောင်းသတင်းများပေးပို့ရန်သီးသန့်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ သတင်းလွှာကိုစီမံသည် MailChimp ။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သတင်းလွှာများပို့ခြင်းအတွက် MailChimp ပလက်ဖောင်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ MailChimp ၎င်းတွင်သင်၏ဆာဗာများသည်ယူအက်စ်တွင်တည်ရှိသည်၊ သူတို့က Safe Harbour ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့တယ်လို့ယူဆတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာကပြောင်းရွှေ့လိမ့်မယ်။ စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်၊ သက်ဆိုင်ရာသတင်းလွှာများပေးပို့ခြင်းကိုစီမံရန်အတွက်သင်၏အချက်အလက်များကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ MailChimp ပလက်ဖောင်းဖြင့်သိမ်းဆည်းထားရန်သင်လက်ခံသည်။ MailChimp သည်ဒေတာကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအီးယူစံနှုန်းများနှင့်အညီလိုက်ဖက်သည်။
တုံ့ပြန်ချက် Form ကို: အဆိုပါ site ကိုမှတ်ချက် post တစ်ခုပုံစံပါဝင်သည်။ သငျသညျထုတ်ဝေဖို့ post ကိုအပေါ်မှတ်ချက် post နိုင်ပါတယ်။ ဤအမှတ်ချက်တွေထည့်သွင်းရန်ပုံစံပေါ်တွင်ထဲသို့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုသူတို့ကိုအလယ်အလတ်နှင့်သူတို့ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့သီးသန့်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
contact form: မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ, အကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆက်အသွယ်များအတွက်အဆက်အသွယ်ပုံစံလည်းရှိပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အီးမေးလ်လိပ်စာကသူတို့ကိုတုံ့ပြန်နှင့်ဝဘ်မှတစ်ဆင့်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူတင်သွင်းဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ကွတ်ကီး: အသုံးပြုသူသည်ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်သွားလာလျှင်“ cookies” များကိုသိမ်းဆည်းသည်၊ အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆွေးနွေးနိုင်သည် cookies များကိုမူဝါဒက အဆိုပါ cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မည်သို့သူတို့ကို disable လုပ်ဖို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက။
ဒေါင်းလုပ်စနစ်များ။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်စာသား၊ ဗွီဒီယိုနှင့်အသံပုံစံများတွင်အခါအားလျော်စွာထည့်သွင်းထားသည့်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုသင် download လုပ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်စာရင်းသွင်းပုံစံကိုသက်ဝင်ရန်အီးမေးလ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ရည်ညွှန်းသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။
စာပေများရောင်းချခြင်း။ ။ Online Servicios Telemáticos SL မှထုတ်ဝေမှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဝယ်သူ၏အချက်အလက် (အမည်၊ အမည်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ စာတိုက်လိပ်စာနှင့်အီးမေးလ်) ကို Paypal ပလက်ဖောင်းမှပုံစံတစ်ခုအနေဖြင့်လိုအပ်သည်။ ငွေပေးချေ၏။
အသုံးပြုသူများသည်လုပ်နိုင်သည် အချိန်မရွေးစာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည် emulador.online မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများမှာတူညီသောသတင်းလွှာဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူသည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ စာမျက်နှာများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်မှုများ၊ Affiliate အစီအစဉ်များ အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သူတို့၏ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်အလေ့အထများအပေါ် အခြေခံ၍ အသုံးပြုသူ၏ကြော်ငြာကိုပြသရန်အသုံးပြုသူ၏ရှာဖွေခြင်းအလေ့အထကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်သည်အမြဲတမ်းအမည်မသိဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူအားဖော်ထုတ်ခြင်းမရှိပါ။
ဤကမကထပြုသောဆိုဒ်များသို့မဟုတ်တွဲဖက်လင့်ခ်များပေါ်တွင်ပေးထားသောအချက်အလက်များသည်ထိုဆိုဒ်များတွင်အသုံးပြုသောသီးသန့်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများကိုတွဲဖက်ချိတ်ဆက်မှုများ၏ privacy မူဝါဒများအားအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
Adsense တွင်ဖော်ပြထားသောကြော်ငြာ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ: Google က Adsense.
ဒီ site ပေါ်တွင်အသုံးပြုသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီခြေရာကောက်သတင်းရင်းမြစ်:Google က (Analytics မှ)
Emulator.online သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့လိုအပ်သည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်၎င်း၏သုံးစွဲသူများ၏ ဦး စားပေးမှုများ၊ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ အသွားအလာပုံစံများနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုအတူတကွလေ့လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအကြိုက်များကိုခြေရာခံခြင်းသည်သင့်အားအသင့်တော်ဆုံးကြော်ငြာများကိုပြသရန်လည်းကူညီပေးသည်။
အသုံးပြုသူနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်သဘာဝသို့မဟုတ်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ emulator.online ("Hyperlink") သို့ hyperlink သို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ link device (ဥပမာ link များသို့မဟုတ်ခလုတ်များ) ကိုတည်ထောင်နိုင်သည်။ Hyperlink ကိုတည်ထောင်ခြင်းသည်မည်သည့်ကိစ္စတွင် emulator.online နှင့်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ် Hyperlink တည်ထောင်ထားသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာတို့အကြားဆက်ဆံရေးတည်ရှိမှုကို၎င်း၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများသို့မဟုတ် emulator.online မှလက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းတို့ရှိခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုများ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ emulator.online သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မည်သည့် hyperlink ကိုမဆိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ခွင့်ရှိသည်။
အသုံးပြုသူမှပုံစံအမျိုးမျိုးများမှတစ်ဆင့်ပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း၊ မည်သည့်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမျိုးကိုမဆိုပေးရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုအာမခံသည်။ ထိုနည်းတူစွာအသုံးပြုသူကပေးထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်သူတို့၏အခြေအနေမှန်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်း၊ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်တိကျမှုရှိကြောင်းအာမခံသည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူသည်အချက်အလက်များ၏မတိကျမှုသို့မဟုတ်မှားယွင်းမှုအတွက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည့် Online Servicios Telemáticos SL သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Online Servicios Telemáticos SL သို့အမြဲတမ်းတာဝန်ရှိသည်။
access ကို, ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်အတိုက်အခံများ၏အခွင့်အရေးကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း
ညာဘက်ကျနော်တို့ကအသုံးပြုသူတွေကိုသိမ်းဆည်းအခမဲ့သို့မဟုတ် jetlagged များအတွက်မမှန်ကန်ကြောင်းဒေတာကို update သို့မဟုတ်မှန်ကန်သောဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးရန်။
သင်သည်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအခွင့်အရေးများကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ် access ကို, ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်အတိုက်အခံ C / Blas de Otero ရှိစာတိုက်မှတစ်ဆင့် n16 ၁၆/၂၄ ။ -1 - Albolote (Granada) သို့မဟုတ် e-mail: info (at) emulador.online သည်ဥပဒေအရခိုင်လုံသောအထောက်အထား၊ ဥပမာ DNI ၏မိတ္တူကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသော“ DATA PROTECTION” တွင်ဖော်ပြသည်။
Online Servicios Telemáticos SL မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ၎င်းကိုကုသမှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့်တရားဝင်သဘောတူခြင်းအခြေအနေများနှင့်တရားဝင်အသိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြေအနေများအကြောင်းအသုံးပြုသူအားအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ကြောင်းအသုံးပြုသူမှကြေငြာသည်။
Online Servicios Telemáticos SL သည်ဤမူဝါဒကိုဥပဒေအသစ်သို့မဟုတ်ဥပဒေသိပ္ပံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျင့်ထုံးများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် Provider သည်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်၎င်းတို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာမျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆက်ထားသောပြောင်းလဲမှုများကိုကြေငြာလိမ့်မည်
LSSICE နှင့်အညီ၊ Online Servicios Telemáticos SL သည်စပမ်းအလေ့အကျင့်များကိုမပြုလုပ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူမှယခင်ကတောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးသည့်စီးပွားဖြစ်အီးမေးလ်များကိုမပို့ခြင်း၊ အချို့သောအချိန်များတွင်ကိုယ်ပိုင်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးပို့နိုင်သည်။ သင့်ကိုလက်ခံသူများ၏ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသာလျှင်တတိယပါတီဖြစ်သည်။